करिब २० प्रतिशतमा लक्षण – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/करिब २० प्रतिशतमा लक्षण
करिब २० प्रतिशतमा लक्षण
मुख्य लक्षण सुक्खा खोकी, ज्वरो र सास फेर्न कठिन
केही संक्रमितमा स्वाद र गन्ध थाहा नहुने लक्षणसमेत
ज्वरो आएको साता दिनमै श्वासप्रश्वासमा समस्या
काठमाडौँ — कोरोना संक्रमितमध्ये करिब २० प्रतिशतमा सुक्खा खोकी, श्वासप्रश्वासमा समस्या, ज्वरोलगायतका लक्षण देखिएको छ । एक महिनाअघि करिब ९९.७ प्रतिशत संक्रमितलाई कुनै लक्षण देखिएको थिएन । ‘हामीले गरेको तथ्यांक विश्लेषणमा हाल सरदर २० प्रतिशत संक्रमितमा लक्षण देखिएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक एवं भाइरोलोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेले भने  ।
एक महिनाअघिसम्म एक हजार संक्रमितमा ३ जनामा मात्र लक्षण देखिएको थियो । कोरोनाको मुख्य लक्षण सुक्खा खोकी हो । संक्रमितमा खोकीबाट समस्या सुरु भएपछि सास फेर्न गाह्रो हुने, बिस्तारै ज्वरो आउने र सिधै दुवै फोक्सोमा निमोनियाको दाग देखिने डा. पाण्डेको भनाइ छ । ‘हामीकहाँ आउने बिरामीमा कोभिडको मुख्य लक्षण ज्वरो, सुक्खा खोकी र त्यसपछि सास फर्ने गाह्रो अर्थात् निमोनिया देखियो,’ त्रिवि शिक्षण अस्पताल कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं छाती रोग विशेषज्ञ डा. सन्तकुमार दासले भने, ‘बिरामीले घाँटी दुखेको समेत गुनासो गरे, लक्षण देखिएका सबैमा ज्वरो पनि देखियो ।’
कोरोनाको धेरैजसो केसमा ३–४ दिन ज्वरो आउने र आफैं समस्या हराउनेसमेत देखिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आउने १५–१६ प्रतिशत केसमा पखालासमेत देखिएको छ । तर जुन केस निमोनियामा परिणत हुन्छ, त्यसमा साता–दस दिनभन्दा बढी ज्वरो रहने डा. दास बताउँछन् । सबैजसो बिरामीले सम्पूर्ण जीउ दुखेको आफूलाई बताएको उनले सुनाए । ‘लक्षण भएकामध्ये करिब २० प्रतिशतलाई थप अक्सिजन दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने ।
केही संक्रमितमा स्वाद र गन्ध थाहा नहुने लक्षणसमेत देखिन थालिएको छ । ‘हामीकहाँ आएका तीन जना बिरामीमा सुँघ्ने क्षमता थिएन, परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ आयो,’ धनुषा जिल्लाको आइसोलेसन संयोजक डा. जामुन सिंहले भने । उनका अनुसार जनकपुर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीमा मुख्य रूपमा ज्वरोखोकी र दमको लक्षण छ । केही बिरामीमा जीउ दुख्ने र पखाला लाग्ने लक्षण पनि छ । कुनैकुनै बिरामीमा छाती दुख्ने समस्या रहेको कोसी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चुमनलाल दासको भनाइ छ । उनका अनुसार यस्तो लक्षण देखिन थाले हाल फोक्सोसम्बन्धी समस्या भएका बिरामीको संख्या बढ्न सक्छ ।
नारायणी अस्पताल वीरगन्जमा कोभिड उपचारमा संलग्न फिजिसियन डा. निरज सिंहका अनुसार त्यहाँ आउने करिब ७५ प्रतिशत कोरोना संक्रमितमा लक्षण देखिएको छ । ‘उनीहरूमा सास फेर्न समस्या, ज्वरो, सुक्खा खोकी, जीउ दुख्ने, केहीमा गन्ध र स्वाद थाहा नपाउने, पखाला लाग्नेजस्ता लक्षण देखिएको छ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष माथिकामा बढी कडा लक्षण देखिएको छ । ५० मुनिकामा कम लक्षण छ र चाँडै निको पनि भइरहेका छन् ।’ सबैजसोलाई ज्वरो देखिएको र लक्षण देखिएको ६ देखि ९ दिनभित्र श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने गरेको आफूले पाएको उनले बताए ।
नारायणी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा.मदनकुमार उपाध्याय भने कोभिडको लक्षण चाँडो परिवर्तन भइरहेको बताउँछन् । ‘रोग पहिचान वा लक्षण देखिएको ४ देखि ७ दिनभित्र बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जटिल केसमा चाँडो मृत्युका घटना भइरहेका छन् ।’
ट्युसन पढ्न घरबाट हिँडेका २ बालक सम्पर्कविहीन ! शेयर गरी खोज्न सहयोग गरौं…
सधै पढ्छु मोबाइल हेरेर भन्थ्यो छोराले जब क’र्तुत थाहा पाए छोराको आमाबाबु धरधरी रोए !
*पुण्य गौतमले जीवनमै पहिलो पटक यति धेरै पिटाइ खाए, पत्रकारको अगाडी डाँको छोडेर रोए”
BREAKING NEWS::काेराेनाकाे त्रा’स बढेपछि नि’षेधाज्ञा जारी…।
भोटो नदेखाइ रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुङमती लगियो